तेस्रो विवाहको तयारीमा आमिर ! - Texas Nepal News - Texas Nepal News
तेस्रो विवाहको तयारीमा आमिर !
मुम्बई(बलिउड लाइफ)– गत अगष्टमा बलिउड अभिनेता आमिर खान र उनकी निर्मात्री तथा लेखिका पत्नी किरण रावले अलग्गिने निर्णय लिँदा बलिउडसँगै आमिरका फ्यानहरुलाई झड्का लागेको थियो । सन् २००५ मा विवाह गरेको यो जोडीले १६ वर्षपछि अलग्गिने निर्णय लिँदा जोकोहीले दुःख मानेका थिए ।
किरण आमिरकी दोस्रो पत्नी हुन् । उनीहरुको छोरा आजाद छन् । आमिरको पहिलो श्रीमति रिना दत्ताका छोरा जुनैद र छोरी इरासँग किरणको उत्तिकै राम्रो सम्बन्ध छ ।
यतिबेला आमिरका फ्यानहरु उनको फिल्म ‘लालसिंह चड्डा’को तिब्र प्रतिक्षामा छन् । यो फिल्मको प्रतिक्षा भइरहँदा यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा आमिरले तेस्रो विवाह गर्न लागेको चर्चा पनि उत्तिकै छ ।
सामाजिक सञ्जालमा आमिरले ‘लाल सिंह चड्डा’को रिलिज पछि विवाहको घोषणा गर्ने चर्चा छ । अहिले नै विवाहको घोषणा गर्दा फिल्मको बक्सअफिसमा पर्नसक्ने सम्भावित असरलाई मध्यनजर गर्दै आमिर चुप रहेको चर्चा उत्तिकै छ ।
आमिरले आफ्नै अघिल्लो फिल्मकी अभिनेत्रीसँग विवाह गर्न लागेको चर्चाले सामाजिक सञ्जाल गर्माएको छ । आमिर र किरणले सम्बन्धविच्छेद गरेको खबर सार्वजनिक हुनासाथ आमिरको नाम ‘दंगल’ अभिनेत्री फातिमा साना शेखसँग जोडिएको थियो । उनका फ्यानहरुले फातिमाकै कारण आमिरले किरणबाट अलग्गिने निर्णय लिएकोसम्म अनुमान गरेका थिए ।
वास्तविकतालाई हेर्ने हो भने आमिर र फातिमा निकै नजिक छन् । फातिमा आमिरलाई आफ्नो ‘मेन्टर’ मान्छिन् । उनीहरुले फिल्म ‘दंगल’ र ‘ठग्स अफ हिन्दुस्तान’मा सहकार्य गरेका छन् । आमिरले अहिलेसम्म आफूबारे सामाजिक सञ्जालमा भएको चर्चाबारे मुख खोलेका छैनन् ।
परिसूचक नेप्सेमा ३२ अंकको गिरावट
एनआरएनए अमेरिकाको २५ प्रतिशत प्रतिनिधिको तत्काल निर्वाचन गर्न कृष्ण लामिछानेको माग
नेपालमा थप २ हजार ६२४ जनामा कोरोना संक्रमण, १३२० जना डिस्चार्ज